China 3ply disposable ihu nkpuchi nke ụdị M, Type II, Type IIR emepụta na suppliers | Isi
Medical Fronthead Infrared Digital temometa
ORIENTMED 812B Mesh nebulizer na CE OA na FDA
WT01 MGBE MGBE MGBE
Akụrụngwa hydrocolloid ostomy nwere ike iwepu otu
LCD gosiputa temometa nke dijitalụ
ORIENTMED Soft-Touch Nchekwa Lancet
Mmechi ọnya ọgwụ ịwa ahụ
Temometa enweghị ọgwụ Mercury
AKW OKWỌ ORT30C Stethoscope
Medical ịwa ahụ Pee breathable uzo teepu
80A mkpịsị aka pulse OXIMETER
ORT575 Uzo elu ogwe aka di elu obula
ỌGW AKW MKWỌ INSULIN SYRINGE
Hydrocolloid Uwe Mgbaaka
3ply disposable ihu nkpuchi nke ụdị M, Type II, Type IIR
Ihe nkpuchi nwere ike ime nwere ihe nkpuchi 3 nke nkpuchi a na-achoghi, 98% oyi akwa na-agbaze ya na akwa a na-achoghi nke nwere akwa hypoallergenic nke di nro nke na egbochi ogwu ma obu nsogbu nke ahu anataghi.
95% ma ọ bụ ruo 99%
ntị ma ọ bụ tie na
ọcha, acha anụnụ anụnụ, akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, pink na na
50pcs / igbe, 40boxes / ctn
n'ime ụbọchị 30 ka iji gosi
akwa na-enweghị akwa
Mpụga mpụga: 20GSM ma ọ bụ 25GSM / m2 (ọcha / acha anụnụ anụnụ / akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ / pink / ọbara ọbara / edo edo ma ọ bụ agba ndị ọzọ)
Middle nyo ply: 20GSM / 25GSM / m2 (ọcha gbazee fụọ nyo);
n'ime ime: 18GSM ma ọ bụ 20GSM / m2
1.Ihe nkpuchi a na-ekpofu ahịhịa mejupụtara mejupụtara 3 oyi akwa nke akwa a na-abụghị kpara, 98% na-agbaze agbapụ na akwa na-enweghị akwa nke nwere akwa mkpuchi hypoallergenic dị nro nke na-egbochi mgbakasị anụ ma ọ bụ nsogbu nfụkasị. Ngwaahịa ahụ kwadoro EN14683 ụdị II, ụdị ọkọlọtọ IIR.
2.No mgbakasi na mfe iku ume site, anapụta magburu onwe ya iku ume arụmọrụ na esi nsogbu. Nnukwu nje filtration arụmọrụ.
Soft & Nkasi Obi ntị Loop
3.Ejiri ihe eji eme ihe na nti site na Latex free gburugburu Lycra na-agbanwe nke na-agbatị na nha 1: 2 na-eme ka ọ dị mfe iyi ma wepu ya na nkasi obi.
4.Mee ihe nnozi imi waya kpamkpam kemeghi ekwe, dabara akwa nke imi na ihu.
1.Ikpuchi ihe nkpuchi nwere ike ibu aru, nkpuchi nkpuchi na nkpuchi imi. A na-eji akwa na-enweghị ihe mkpuchi na meltblown na-enweghị ihe mkpuchi, ihe mkpuchi imi bụ ihe plastik bendable, ụdị nkpuchi nkpuchi A na-eji akwa na-agbanwe agbanwe, na ụdị B na-eji akwa na-enweghị isi;
2. Nje na nje filtration arụmọrụ abụghị ihe na-erughị 95%. Mgbochi ventilashị ahụ abụghị ihe karịrị 49Pa / cm2. Ọnụ ọgụgụ nke nje nje bụ≤100CFU / gE coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, hemolytic streptococcus, na fungi sh.niile agaghị achọpụta.
Akwụkwọ: CE ISO FDA, White edepụtara na China.
Nke gara aga: Ọkachamara Nchekwa Disposable Uwe
Osote: ORT103A Stethoscope
FFP2 uzuzu ihu nkpuchi na OA ISO FDA
Medical disposable Pee iche uwe
Medical disposable echebe akpụkpọ ụkwụ mkpuchi
Ahụike Nitrile / PVC Gloves
ORIENTMED 5 oyi akwa disposable KN95 ihu nkpuchi bú ...
Cone ụdị Disposable particulate Respirator